Ahlusunna Waljamaaca oo Goobaha ay ka arimiyaan ka mamnuucay Siyaasiyiinta. – SBC
Ahlusunna Waljamaaca oo Goobaha ay ka arimiyaan ka mamnuucay Siyaasiyiinta.
Posted by Webmaster on December 17, 2011 Comments
Maamulka Culimada Ahlusuna waljamaaca ee ka arimiya Gobolka Galgaduud ee Bartamaha Soomaaliya ayaa hadal cad ka soo saaray Siyaasiyiinta iska yimaada gobolada ay ka arimiyaan .
Sh Maxamed Yuusuf Xeefoow gudoomiyaha Gudiga Fulinta Ahlusuna waljamaaca ayaa kulan saxaafadeed uu saxaafada ugu qabtay Xarunta gobolkaas ee Dhuusamareeb ayaa sheegay in aysan Ogolaandoonin Siyaasi aan ka amar qaadan Ahlusuna waljamaaca uu iska soo galo gudaha gobolka, isagoona tibaaxay in siyaasiyiin gudaha u soo galay gobolka marar kala duwan ay ka sameeyeen qal qal iyo amaan xumo.
“Siyaasi aan ka tirsaneyn Ahlusuna waljamaaca, amar lamaan ma soo gali karo gobolka” ayaa uu yiri gudoomiyaha gudiga fulinta Ahlusuna waljamaaaca, waxaanu intaasi raaciyay in siyaasigii amar la’aan ku soo gala gobolka ay ka qaadi doonaan talaabooyin sharciga waafaqsan.
Sikastaba ha ahaatee Maamulka Ahlusuna ayaa go’aankan soo qaadatay ka dib markii ay sheegeen in siyaasiyiin u dhashay gobolka balse aan ka tirsaneen Maamulka Ahlusuna ay dhibaatooyin ka abuureen qeybo ka mid ah gobolka.